Firefox 9 hadda waa la heli karaa si loo soo dejiyo! | Laga soo bilaabo Linux
Firefox 9 hadda waa la heli karaa si loo soo dejiyo!
La Firefox nooca 9 Waxaa si xor ah loo heli karaa si loogu soo dejiyo barta rasmiga ah ee Mozilla Foundation. La jaan qaada Windows, Mac iyo Linux, ayaa leh horumar xawaaraha y muuqaalada cusub.
2 Ku rakibida Linux
Taageerada font-stretch iyo qoraalka-buuxinta guryaha CSS.
Kordhinta taageerada HTML5, MathML, iyo CSS.
Dayactirka cayayaanka kala duwan.
Waxaa sidoo kale jiray horumarin ku saabsan nooca loogu talagalay Mac OS X Libaax, halkaasoo isticmaaleyaashu ay awoodi doonaan inay adeegsadaan dhaqdhaqaaqyo qaarkood si ay ugu dhex wareegaan bogagga shabakadda.
Sidoo kale, isbeddelada waxaa lagu hirgeliyay nooca loogu talagalay kiniiniyada Android, oo ay ku yaalliin badhanka "Back" ee cinwaanka cinwaanka, kaas oo loo fidiyey dhinaca midig ee shaashadda si looga dhigo badhanka "Cusbooneysiinta" iyo "Kuwa ugu Caansan".
Dhinaca kale, Mozilla Foundation waxay cusbooneysiisay heshiiskii ay la gashay Google si ay u noqoto bixiyaha raadinta ee aasaas ahaan loogu sameeyay Firefox. Waa isbahaysi muhiim u ah horumarka iyo xasilloonida ururka, kaasoo ka soo gala ilahaa ilaa 80%.
Wixii macluumaad dheeraad ah, waad booqan kartaa sii deynta qoraalada.
Soodejiso Firefox 9
Ku rakibida Linux
Noocaan cusub ayaa hubaal ka soo muuqan doona maalmaha soo socda bakhaarrada rasmiga ah ee qaybinta ugu caansan. Kuwa samir la'aanta ah ee isticmaalaya Ubuntu ama qaybinta ka soo jeeda:
sudo apt-get rakibi Firefox
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » Firefox 9 hadda waa la heli karaa si loo soo dejiyo!
Ma jiraa qof garanaya sababta bogga html5test.com/ Firefox uu u siinayo dhibco 314 daaqadaha iyo nooca loo yaqaan 'Linux' wuxuu siinayaa 299 pts. : /
Pioneer: Ciyaarta Halista Weyn ee Cidlada ah
Iyada oo Terminal: Hagaajinta muuqaalka qalabka (la cusbooneysiiyay)